1. Nsɛmfua anan a wɔkyerɛw guu ɔfasu bi ho wɔ bere tenten a atwam no mu nyaa nnipa so nkɛntɛnso kɛse duu he?
NSƐMFUA ntiantiaa anan a wɔakyerɛw agu ɔfasu a wɔakokwaw ho ho. Nanso, saa nsɛmfua anan no maa ehu kaa sodifo tumfoɔ bi ma ɛkame ayɛ sɛ n’adwene sɛee. Ɛkaa tu a wotuu ahene baanu, wɔn mu biako wu, ne wiase tumi kɛse bi awiei ho asɛm. Saa nsɛmfua no maa nyamesomfo bi a na wobu wɔn anim guu ase. Nea ɛho hia sen biara no, ɛpagyaw Yehowa ɔsom kronn no, na ɛsan sii ne tumidi so dua wɔ bere a na nnipa dodow no ara bu emu biara adewa no. Saa nsɛmfua no ma yehu nsɛm a esisi wɔ wiase nnɛ no mpo! Ɔkwan bɛn so na nsɛmfua anan tumi yɛ eyi nyinaa? Ma yɛnhwɛ.
2. (a) Dɛn na esii wɔ Babilon wɔ Nebukadnesar wu akyi? (b) Na sodifo bɛn na odi tumi saa bere no?
2 Na mfe pii atwam fi bere a nsɛm a wɔkae wɔ Daniel ti 4 no sisii no. Mfe 43 a Ɔhene Nebukadnesar ɔhantanni no de dii tumi wɔ Babilon no baa awiei bere a owui wɔ 582 A.Y.B. mu no. N’abusuafo bedii tumi nnidiso nnidiso nanso esiane sɛ wowuwuu ntɛm anaasɛ wokunkum wɔn nti, wɔn ahenni baa awiei mmiako mmiako. Awiei koraa no, ɔbarima bi a wɔfrɛ no Nabonido nam atuatew so nyaa ahengua no. Na ɛda adi sɛ Nabonido a na ɔyɛ ɔsram nyame Sin akɔmfowa panyin ba no mfi Babilon ahene abusua mu. Animdefo bi ka sɛ nea ɛbɛyɛ na wama wɔagye n’ahenni atom no, ɔwaree Nebukadnesar babea, na ɔyɛɛ wɔn babarima Belsasar ne yɔnko sodifo, na ogyaw no sɛ onni Babilon so bere a ofii hɔ kɔtraa baabi mfe pii no. Sɛ ɛte saa de a, ɛnde na Belsasar yɛ Nebukadnesar banana. So ɔnam ne nanabarima osuahu ahorow so hui sɛ Yehowa ne Onyankopɔn Pumpuni no, a otumi brɛ ɔhene biara ase? Dabida!—Daniel 4:37.
APONTOW BI GYE NSAM
3. Na Belsasar apontow no te dɛn?
3 Apontow bi na efi Daniel ti 5 ase. “Ɔhene Belsasar tow n’abirɛmpɔn apem ponkɛse, na ɔnom nsã, apem no anim.” (Daniel 5:1) Sɛnea wubetumi ahu no, ɛbɛyɛ sɛ na ehia asa kɛse na mmarima yi nyinaa ne ɔhene no yerenom ne ne yefamnom anya baabi atra. Nhomanimfo bi ka sɛ: “Na Babilonfo apontow sosoe na ɛyɛ anigye, nanso ɛtaa ma wɔbow nsa. Wɔde bobesa a efi amannɔne ne akɔnnɔde biara bi sisii ɔpon so. Aduhuam gyee asa no so nyinaa; nnwontofo ne mmɛnhyɛnfo gyee wɔn a wɔahyiam no ani.” Bere a na Belsasar te ɔpon ti wɔ baabi a obiara betumi ahu no no, ɔnom ne nsa—na ɔnom mpɛn pii.
4. (a) Dɛn nti na na ntease nnim sɛ Babilonfo bɛtow pon October 5/6, 539 A.Y.B. anadwo no? (b) Dɛn na ɛda adi sɛ ɛmaa Babilonfo no nyaa ahotoso bere a na asraafo abɛtoa wɔn no?
4 Na ɛyɛ nwonwa sɛ anadwo yi—October 5/6, 539 A.Y.B. Babilonfo regye wɔn ani saa. Na wɔn man reko, na nneɛma nkɔ yiye mma wɔn. Ná Nabonido dii nkogu wɔ Medo-Persia dɔm a na wɔabɛtoa wɔn no nsam nkyɛe koraa, na waguan kɔ Borsippa wɔ Babilon kesee fam atɔe. Saa bere no na Kores dɔm abɛbɔ nsra wɔ Babilon akyi pɛɛ. Nanso na ɛte sɛ nea ɛnhaw Belsasar ne n’abirɛmpɔn no. Anyɛ yiye koraa no, na wɔn kurow ne Babilon a wontumi ntwiw mfa so no! Na n’afasu akɛse dennen no wɔ nsuka a emu dɔ a Asubɔnten Efurate kɛse no ayɛ mu ma bere a ɛsen fa kurow no mu ho. Na ɔtamfo biara mmɛtoaa Babilon mpofirim da wɔ mfe apem ne akyi. Ɛnde dɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔhaw wɔn ho? Ebia Belsasar nyaa adwene sɛ wɔn apontow no ase dede no bɛma atamfo a wɔwɔ kurow no akyi no ahu ahotoso a wɔwɔ na abu wɔn abam.
5, 6. Dɛn na asabow maa Belsasar yɛe, na dɛn nti na eyi kyerɛ sɛ ɔyeyaw Yehowa paa?
5 Ankyɛ asanom bebrebe no faa Belsasar ani so. Sɛnea Mmebusɛm 20:1 ka no, “nsa yɛ ɔfɛwdifo.” Saa bere yi de, nsa no maa ɔhene no dii nkwaseasɛm bi a na ɛyɛ aniberesɛm paa. Ɔhyɛe sɛ wɔnkɔfa Yehowa asɔrefie nnwinne kronkron no mmra apontow no ase. Na ɛsɛ sɛ wɔde nnwinne a wɔfaa no sɛ asade bere a Nebukadnesar dii Yerusalem so no di dwuma wɔ ɔsom kronn mu nkutoo. Na wɔabɔ Yudafo asɔfo a na wɔama wɔn kwan sɛ wɔmfa nni dwuma wɔ Yerusalem asɔrefie hɔ bere a atwam no mpo kɔkɔ sɛ wɔntew wɔn ho.—Daniel 5:2; fa toto Yesaia 52:11 ho.
6 Nanso, na Belsasar rebɛyɛ animtiaabude a ɛsen saa. ‘Ɔhene ne n’abirɛmpɔn ne ne yerenom ne ne yefamnom nonom nsa na wɔkamfoo sika ne dwetɛ ne kɔbere ne dade ne dua ne ɔbo anyame no.’ (Daniel 5:3, 4) Enti na Belsasar pɛ sɛ ɔpagyaw n’atoro anyame no sen Yehowa! Ɛte sɛ nea na Babilonfo da saa su yi adi. Wobuu Yudafo a wɔafa wɔn nnommum no animtiaa, dii wɔn som ho fɛw, na wɔamma wɔannya anidaso biara sɛ wɔbɛsan akɔ wɔn man a wɔn ani gye ho no mu. (Dwom 137:1-3; Yesaia 14:16, 17) Ebia ɔhempɔn a na wabow yi tee nka sɛ nnommum yi a ɔbɛbrɛ wɔn ase ayeyaw wɔn Nyankopɔn no bɛsɔ ne yerenom ne n’abirɛmpɔn no ani, na ama wayɛ sɛ obi a ɔyɛ den. * Nanso sɛ saa tumidi no maa Belsasar n’ani gyei a, ɛnde ankyɛ.
ƆFASU HO NKYERƐWEE NO
7, 8. Ɔkwan bɛn so na biribi bɛbɔɔ Belsasar apontow no mu, na tumi bɛn na eyi nyae wɔ ɔhene no so?
7 Asɛm a wɔnam honhom so kyerɛwee no ka sɛ: “Dɔn no mu ara na onipa nsa so nsateaa fi bae bɛkyerɛw ahennan no fasu no akado so, kaneadua no anim, na ɔhene huu nsa a ɛkyerɛwee no ano.” (Daniel 5:5) Ahude bɛn ara ni! Nsa bi pue mpofirim a ɛsɛn wim wɔ ɔfasu no baabi a kanea ama ayɛ hann no ho. Hwɛ sɛnea apontow no ase tɛm dinn mpofirim bere a wɔn a wɔwɔ ase no dan wɔn ani kɔhwɛe no. Nsa no fii ase kyerɛw ahintasɛm bi guu ɔfasu no ho. * Na anwonwade yi yɛ hu na wɔda so kae araa ma ɛde besi nnɛ no, nkurɔfo ka sɛ “ɔfasu ho nkyerɛwee” de kyerɛ sɛ asiane bi reba.
8 Tumi bɛn na enyaa wɔ ɔhene ɔhantanni yi a na wabɔ mmɔden sɛ ɔbɛma ɔne n’anyame so asen Yehowa no so? “Ɛnna ɔhene anim danee, na n’adwene haw no, na n’asen mu nhama hodwowee, na ne nkotodwe ka bobɔɔm biribiri.” (Daniel 5:6) Na Belsasar pɛ sɛ ɔyɛ ne ho kokuroo wɔ ne manfo anim. Nanso, ɔbɛdanee ohufo kɛse—n’anim hoae, n’asen hodwowee, ɔpopoe biribiri araa ma ne nkotodwe keka bobɔɔ mu. Ampa, asɛm a Dawid ka kyerɛɛ Yehowa wɔ dwom mu no yɛ nokware: “W’ani sa ahantanfo na woabrɛ wɔn ase.”—2 Samuel 22:1, 28; fa toto Mmebusɛm 18:12 ho.
9. (a) Dɛn nti na ehu a ɛkaa Belsasar no nyɛ Onyankopɔn suro? (b) Dɛn na ɔhene no kae sɛ ɔde bɛma Babilon anyansafo no?
9 Ɛsɛ sɛ yehu sɛ ehu a ɛkaa Belsasar no nyɛ Nyankopɔn suro a ɛyɛ nidi kɛse a wɔde ma Yehowa a ɛne nyansa nyinaa mfiase no. (Mmebusɛm 9:10) Dabi, na ɛnyɛ osuro pa, na amma ɔhempɔn a na ne ho popo no annya nyansa biara. * Sɛ anka obebisa Onyankopɔn a na wasopa no hɔ bɔne fafiri no, ɔteɛɛm denneennen frɛɛ “pɛadehufo, Kaldeafo ne nyankonnekyerɛfo.” Ɔkae mpo sɛ: “Obiara a ɔbɛkan kyerɛw yi na wakyerɛ me ase no, wobefura no ɔtankɔkɔɔ, na sika ntweaban agu ne kɔn mu, na wayɛ nea ɔto so abiɛsa adi ahenni yi mu tumi.” (Daniel 5:7) Na ahenni no sodifo a ɔto so abiɛsa no benya tumi ankasa, a ahene baanu a wɔte ahengua no so a wɔne Nabonido ne Belsasar ankasa nkutoo na wɔsen no. Na anka wɔde dibea a ɛte saa bɛto hɔ ama Belsasar ba panyin. Na ɛkyerɛ sɛnea na ɔhene no ani abere sɛ obenya obi akyerɛ anwonwasɛm yi ase!
10. Dɛn na anyansafo no tumi yɛe bere a wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛkyerɛ ɔfasu no ho nkyerɛwee ase no?
10 Anyansafo no too santen kɔɔ asa kɛse no so. Na wɔdɔɔso, efisɛ na Babilon yɛ kurow a atorosom ne asɔredan ahorow abu so wom. Akyinnye biara nni ho sɛ na nnipa a wose wɔkyerɛ nsɛnkyerɛnne ne ahintasɛm ase dɔɔso. Ɛbɛyɛ sɛ hokwan a anyansafo yi nyae no maa wɔn ani gyei. Na wɔanya hokwan a ɛbɛma wɔada wɔn nyansa adi wɔ nnipa atitiriw anim, anya ɔhene no anim dom ne tumi kɛse. Nanso wɔantumi anyɛ hwee! “Wɔantumi ankan kyerɛw no ankyerɛ ɔhene ase.” *—Daniel 5:8.
11. Ɛbɛyɛ sɛ dɛn nti na Babilon anyansafo antumi ankenkan nkyerɛwee no?
11 Yentumi nhu sɛ ebia na Babilon anyansafo no nnim nkyerɛwde—nkyerɛwde nkorɛnkorɛ—no ankasa. Sɛ na wonnim a, anka mmarima a wɔn ahonim awu yi benya hokwan abɔ wɔn tirim aka biribiara kɛkɛ de adɛfɛdɛfɛ ɔhene no. Ade foforo nso ne sɛ ebia na wotumi kenkan nkyerɛwde no koraa. Nanso, esiane sɛ na kasa te sɛ Aram ne Hebri nni ɛnne nnyigyei nti, na asɛmfua biara betumi akyerɛ nneɛma pii. Sɛ saa a, ɛbɛyɛ sɛ anyansafo no antumi ankyerɛ nsɛmfua ko a ɛyɛ. Sɛ wotumi yɛɛ saa mpo a, wɔantumi ante nsɛmfua no ase na wɔakyerɛ ase. Sɛnea ɛte biara no, ade biako da adi: Babilon anyansafo antumi ankyerɛ ase—koraa!
12. Dɛn na asɛm no a anyansafo no antumi ankyerɛ ase no daa no adi?
12 Enti ɛdaa adi sɛ anyansafo no yɛ nnaadaafo, wɔn nyamesom ahyehyɛde no yɛ nnaadaa. Hwɛ sɛnea wodii no huammɔ! Bere a Belsasar hui sɛ ɔde ne ho ato nyamesomfo yi so kwa no, ehu kɛse san kaa no, ɔkɔɔ so yɛɛ hoyaa na n’abirɛmpɔn mpo “tirim yɛɛ wɔn keserenene.” *—Daniel 5:9.
WƆKƆFRƐ ƆBARIMA A ƆWƆ NHUMU BA
13. (a) Dɛn nti na Ɔhemmaa no hyɛɛ nyansa sɛ wɔnkɔfrɛ Daniel? (b) Na Daniel asetra te dɛn?
13 Wɔ bere a emu yɛ den yi mu no, ɔhemmaa no ankasa—ɛbɛyɛ ɔhene no maame—baa apontow asa no so. Na wate gyegyeegye a ɛrekɔ so wɔ apontow no ase no, na na onim obi a obetumi akyerɛ ɔfasu no ho nkyerɛwee no ase. Mfe bi a atwam no, ne papa Nebukadnesar paw Daniel sɛ n’anyansafo nyinaa panyin. Ɔhemmaa no kaee sɛ ɔyɛ ɔbarima a ɔwɔ “honhom a ɛkyɛn so ne adwempa ne nimdeɛ.” Esiane sɛ na ɛte sɛ nea Belsasar nnim Daniel nti, ɛbɛyɛ sɛ na odiyifo no dibea a ɛkorɔn wɔ ahenni no mu afi ne nsa wɔ Nebukadnesar wu akyi. Nanso na ɛnyɛ dibea na ɛho hia Daniel. Ɛbɛyɛ sɛ saa bere no na wadi mfe 90 ne akyi, na na ɔda so ara de nokwaredi resom Yehowa. Wɔ bɛyɛ mfe aduɔwɔtwe a na ɔde atra nnommumfa mu wɔ Babilon nyinaa akyi no, na wɔde ne Hebrifo din no nim no. Ɔhemmaa no mpo frɛɛ no Daniel, wamfa Babilonfo din a wɔde maa no bere bi no amfrɛ no. Nokwarem ɔhyɛɛ ɔhene no nkuran sɛ: “Ma wɔnkɔfrɛ Daniel, na ɔmmɛkyerɛ ase.”—Daniel 1:7; 5:10-12.
14. Ahokyere bɛn na Daniel kɔɔ mu bere a ohuu ɔfasu no ho nkyerɛwee no?
14 Wɔkɔfrɛɛ Daniel baa Belsasar anim. Na ɛyɛ aniwusɛm sɛ ɔhene no bɛsrɛ biribi afi Yudani a ɔyeyaw ne Nyankopɔn nkyɛe yi hɔ. Nanso, Belsasar bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛdɛfɛdɛfɛ Daniel, kae sɛ ɔde akatua koro no ara bɛma no—nea ɔto so abiɛsa wɔ ahenni no mu—sɛ obetumi akenkan anwonwasɛm no akyerɛ ase a. (Daniel 5:13-16) Daniel maa n’ani so hwɛɛ ɔfasu no ho nkyerɛwee no, na honhom kronkron ma otumi huu nea ɛkyerɛ. Na ɛyɛ asɛm a ɛkyerɛ ɔsɛe a efi Yehowa Nyankopɔn hɔ! Ɔkwan bɛn so na Daniel betumi aka atɛn a ɛyɛ den a Onyankopɔn abu ɔhene huhuni yi asi n’anim—wɔ ne yerenom ne n’abirɛmpɔn anim? Susuw ahokyere a na Daniel wom no ho! So ɔhene no adɛfɛdɛfɛsɛm ne sika ne dibea a ɔkae sɛ ɔde bɛma no no dan ne ti? Odiyifo no bɛbrɛ tumi a ɛwɔ Yehowa asɛm no mu no ase?
15, 16. Abakɔsɛm mu ade titiriw bɛn na Belsasar anhu, na ɔkwan bɛn so na nkogudi a ɛte saa abu so nnɛ?
15 Daniel de akokoduru kae sɛ: “Ma w’ayɛyɛde ntra wo hɔ, na fa w’adekyɛde ma obi foforo, nanso mɛkan kyerɛw no makyerɛ ɔhene, na mama wahu ne nkyerɛase.” (Daniel 5:17) Afei, Daniel kyerɛe sɛ na Nebukadnesar yɛ onipa kɛse, ɔhene a na ɔwɔ tumi araa ma otumi kum obiara a ɔpɛ, bɔ obiara a ɔpɛ, pagyaw anaa ɔbrɛ obiara a ɔpɛ ase. Nanso, Daniel kaee Belsasar sɛ Yehowa, “ɔsorosoro Nyankopɔn” no na ɔmaa Nebukadnesar yɛɛ onipa kɛse. Na Yehowa na ɔbrɛɛ ɔhene tumfoɔ no ase bere a ɔyɛɛ ahantan no. Yiw, ɔmaa Nebukadnesar hui sɛ “ɔsorosoro Nyankopɔn na odi nnipa ahenni so tumi, na ɔde obiara a ɔpɛ si so.”—Daniel 5:18-21.
16 Na Belsasar ‘nim eyi nyinaa.’ Nanso wansua hwee amfi abakɔsɛm mu. Nokwarem no, na ɛnyɛ Nebukadnesar ahantan no bi kɛkɛ na ɔdaa no adi na mmom ɔsopaa Yehowa ankasa. Daniel daa ɔhene no bɔne adi. Afei nso, ɔde akokoduru ka kyerɛɛ Belsasar wɔ saa abosonsomfo a na wɔahyiam no anim sɛ atoro anyame ‘nte asɛm na wonnim hwee.’ Onyankopɔn diyifo kokodurufo no toaa so sɛ Yehowa Nyankopɔn nte sɛ saa anyame hunu no, na ɔhene “home wɔ ne nsam.” Ɛde besi nnɛ no, nnipa de nneɛma a nkwa nnim ayeyɛ anyame, na wɔsom sika, adwuma, anuonyam, ne anigyede mpo. Nanso eyi mu biara ntumi mma nkwa. Yehowa nkutoo na ɔma yɛn nyinaa tra nkwa mu, na ɔma yɛn ahome biara.—Daniel 5:22, 23; Asomafo no Nnwuma 17:24, 25.
WƆKYERƐ AHINTASƐM BI ASE!
17, 18. Nsɛmfua anan bɛn na wɔkyerɛw guu ɔfasu no ho, na dɛn na ɛkyerɛ ankasa?
17 Afei odiyifo akwakoraa no toaa so yɛɛ nea Babilon anyansafo nyinaa antumi anyɛ no. Ɔkenkan ɔfasu no ho nkyerɛwee no na ɔkyerɛɛ ase. Na nsɛm no ne: “Mené, Mené, Tekél Ufarsin.” (Daniel 5:24, 25) Ɛkyerɛ dɛn?
18 Nea nsɛm no kyerɛ ankasa ne “mina, mina, dwetɛbona, ne dwetɛbona fã.” Na asɛmfua biara kyerɛ sika bi bo, na wɔakyerɛw fi nea ne bo kɔ soro so de ba fam nnidiso nnidiso. Anwonwasɛm bɛn ara ni! Sɛ Babilon anyansafo no tumi huu nea nkyerɛwde no yɛ mpo a, ɛnyɛ nwonwa sɛ wɔantumi ankyerɛ ase.
19. Na asɛmfua “Mene” no kyerɛ dɛn?
19 Daniel nam Onyankopɔn honhom kronkron no so kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Asɛm no nkyerɛase ni: Mene, Onyankopɔn akan w’ahenni, na wabɔ no.” (Daniel 5:26) Asɛmfua a edi kan no mu anom nnyigyei no ma wotumi de asɛmfua “mina” ne Aram asɛmfua bi a ɛkyerɛ “akan” bom di dwuma, a na egyina ɛnne nnyigyei a ɔkenkanfo no de hyehyem no so. Na Daniel nim yiye sɛ Yudafo nnommumfa no reba awiei. Na mfe 70 a wɔhyɛɛ nkɔm sɛ ebedi no mu mfe 68 atwam dedaw. (Yeremia 29:10) Na Bere Sodifo Kɛse, Yehowa, akan nna a Babilon de adi wiase tumi no, na na n’awiei abɛn sen sɛnea obiara a ɔwɔ Belsasar apontow no ase susuwii. Nokwarem no, na bere asa ama Belsasar—ne ne papa Nabonido nso. Ebia ɛno nti na wɔkyerɛw asɛmfua “Mené” no mprenu no—de bɔɔ ahenni abien yi awiei dawuru.
20. Na asɛmfua “Tekel” no kyerɛ dɛn, na ɔkwan bɛn so na na ɛfa Belsasar ho?
20 Nanso “Tekel” de, wɔkyerɛw no biako pɛ wɔ biako kabeam. Eyi betumi akyerɛ sɛ wɔka kyerɛɛ Belsasar titiriw. Na eyi bɛyɛ nea ɛfata, efisɛ ɔno na na wabu Yehowa animtiaa. Asɛmfua no ankasa kyerɛ “dwetɛbona,” nanso anom nnyigyei no ma wotumi de gyina hɔ ma asɛmfua “wɔakari.” Enti, Daniel ka kyerɛɛ Belsasar sɛ: “Tekel, wɔakari wo nsenia mu, na wɔahu wo sɛ wunnu.” (Daniel 5:27) Yehowa mmu aman nyinaa hwee te sɛ nsenia mu mfutumawa bi. (Yesaia 40:15) Wontumi nsiw n’atirimpɔw kwan. Ɛnde, dɛn na ɔhene ɔhantanni biako betumi ayɛ? Na Belsasar abɔ mmɔden sɛ ɔbɛma ne ho so asen amansan Hene no. Na saa onipa kɛkɛ yi ama n’ani atra ne ntɔn asopa Yehowa na wadi nokware som ho fɛw nanso ‘wohui sɛ onnu.’ Enti, na Belsasar fata atemmu a na ɛreba ntɛmntɛm no koraa!
21. Ɔkwan bɛn so na na “Ufarsin” yɛ asɛmfua biako a egyina hɔ ma nneɛma abiɛsa, na dɛn na asɛmfua yi kyerɛe sɛ ɛbɛto Babilon daakye sɛ wiase tumi?
21 Na asɛmfua a etwa to wɔ ɔfasu no ho ne “Ufarsin.” Daniel kenkan wɔ biako kabeam sɛ, “Peres,” ebia esiane sɛ na ɔrekasa akyerɛ ɔhene biako bere a nea ɔka ne ho nni hɔ no nti. Asɛmfua yi de Yehowa ahintasɛm kɛse no baa awiei denam asɛmfua biako a wɔde gyina hɔ ma nneɛma abiɛsa no so. Nea “ufarsin” kyerɛ ankasa ne “dwetɛbona fã.” Nanso nkyerɛwde no tumi kyerɛ nneɛma foforo abien nso—“nkyekyem” ne “Persiafo.” Enti Daniel hyɛɛ nkɔm sɛ: “Peres, wɔakyɛ w’ahenni mu de ama Mediafo ne Persiafo.”—Daniel 5:28.
22. Dɛn na Belsasar yɛe wɔ ahintasɛm no asekyerɛ ho, na anidaso bɛn na ebia na ɔwɔ?
22 Enti wɔkyerɛɛ ahintasɛm no ase. Na Babilon a ɛwɔ tumi no rebedi nkogu wɔ Medo-Persiafo asraafo nsam. Ɛwom sɛ ɔsɛe a wɔkae sɛ ɛreba yi ama Belsasar abotow de, nanso odii n’asɛm so. Ɔmaa ne nkoa de ɔtankɔkɔɔ furaa Daniel, de sika kɔnmuade guu ne kɔn mu paee mu kae sɛ ɔne ahenni no sodifo a ɔto so abiɛsa. (Daniel 5:29) Daniel ampo anuonyam yi, ohui sɛ ɛyɛ nidi a ɛfata Yehowa. Ebia Belsasar hwɛɛ kwan sɛ obegow Yehowa atemmu mu denam Yehowa diyifo a ɔbɛhyɛ no anuonyam so. Sɛ saa a, ɛnde aka akyi koraa.
23. Tete nkɔmhyɛ bɛn na na ɛrenya mmamu bere a na Belsasar apontow no rekɔ so mpo no?
23 Bere a na Belsasar ne n’abirɛmpɔn renom nsa ahyɛ wɔn anyame anuonyam na wodi Yehowa ho fɛw mpo no, na biribi kɛse rekɔ so wɔ ahemfie no akyi sum no mu. Na nkɔm a wɔnam Yesaia so hyɛe bɛyɛ mfe ahanu a atwam no renya mmamu. Na Yehowa ahyɛ Babilon ho nkɔm sɛ: “Mɛma n’apinisi nyinaa to atwa.” Yiw, na nhyɛso a saa kurow bɔne no de ba Onyankopɔn nkurɔfo a wɔapaw wɔn no so nyinaa to betwa. Ɔkwan bɛn so? Nkɔmhyɛ koro yi ara kae sɛ: “Elam, foro bra! Media, bɛka no hyɛ mu!” Elam bɛkaa Persia ho wɔ odiyifo Yesaia akyi. Bere a Belsasar tow pon a na wɔaka ho asɛm wɔ Yesaia nkɔmhyɛ koro yi ara mu no, na Persia ne Media asraafo aka abom ‘reforo abɛka’ Babilon ‘ahyɛ mu.’—Yesaia 21:1, 2, 5, 6.
24. Babilon asehwe ho nsɛm bɛn na Yesaia nkɔmhyɛ no kae?
24 Nokwarem no, na wɔabɔ nea ɔda asraafo dɔm yi ano din akyerɛ dedaw, te sɛ nea na wɔaka mpasuatwa mu nneɛma atitiriw asie no. Na Yesaia ahyɛ nkɔm dedaw wɔ mfe 200 a atwam no mu sɛ Yehowa bɛsra obi a ne din de Kores ma wako atia Babilon. Wɔ ɔko no mu no, obeyi akwanside biara afi n’anim. Babilon nsu ‘bɛyow,’ wobebue n’aponkɛse ano ato hɔ. (Yesaia 44:27–45:3) Na ɛbaa mu saa. Kores asraafo dan Asubɔnten Eufrate ani kyerɛɛ baabi foforo, ma nsu no yow araa ma na wotumi nantew faa asubɔnka no mu. Na awɛmfo a wɔyɛ anibiannaso abue Babilon afasu no apon ano ato hɔ. Wiase abakɔsɛm akyerɛwfo gye tom sɛ wɔko faa kurow no bere a na emufo retow pon no. Wɔko faa Babilon a obiara ne wɔn anko. (Yeremia 51:30) Nanso, anyɛ yiye koraa no, onipa titiriw bi wui. Daniel bɔɔ amanneɛ sɛ: “Anadwo no ara na wokum Kaldeafo hene Belsasar. Na Mediani Dario faa ahenni no, na wadi mfe aduosia abien.”—Daniel 5:30, 31.
NEA YESUA FI ƆFASU NO HO NKYERƐWEE MU
25. (a) Dɛn nti na tete Babilon yɛ nnɛ wiase atorosom ahyehyɛde no ho sɛnkyerɛnne a ɛfata? (b) Ɔkwan bɛn so na wɔfaa Onyankopɔn nnɛyi asomfo nnommum wɔ Babilon?
25 Asɛm a wɔnam honhom so kyerɛwee wɔ Daniel ti 5 no kyerɛ biribi titiriw ma yɛn. Sɛ atorosom kurow titiriw no, tete Babilon yɛ wiase atoro som ahemman no ho sɛnkyerɛnne a ɛfata. Wɔfrɛ wiase ahyehyɛde kɛse ɔdaadaafo a wɔayɛ ne ho mfonini wɔ Adiyisɛm sɛ aguaman yi sɛ “Babilon Kɛse.” (Adiyisɛm 17:5) Esiane sɛ ontie n’atoro nkyerɛkyerɛ ne nneyɛe a egu Onyankopɔn ho fĩ ho kɔkɔbɔ biara nti, wataa wɔn a wɔka Onyankopɔn Asɛm mu nokware kyerɛ no. Te sɛ nnipa a na wɔte tete Yerusalem ne Yuda no, na Kristofo a wɔasra wɔn no nkaefo anokwafo wɔ nnommumfa koraa mu wɔ “Babilon Kɛse” no mu bere a ɔtaa a asɔfo hyɛ akyi ma wɔbaraa wɔn Ahenni asɛnka adwuma no wɔ 1918 mu no.
26. (a) Ɔkwan bɛn so na “Babilon Kɛse” no hwee ase wɔ 1919 mu? (b) Kɔkɔbɔ bɛn na ɛsɛ sɛ yɛn ankasa yetie na yɛka kyerɛ afoforo?
26 Nanso, “Babilon Kɛse” no hwee ase mpofirim! Oo, na ɛyɛ asehwe a ɛkame ayɛ sɛ anyɛ hoo—te sɛ nea tete Babilon hwee ase wɔ 539 A.Y.B. a anyɛ hoo no. Nanso sɛnkyerɛnne kwan so asehwe yi sɛee no. Esii 1919 Y.B. bere a wogyee Yehowa nkurɔfo fii Babilon nnommumfa mu na wonyaa Onyankopɔn anim dom no. Eyi maa tumi a “Babilon Kɛse” wɔ wɔ Onyankopɔn nkurɔfo so no baa awiei, na afei amanfo behuu no sɛ ɔdaadaafo a wontumi mfa wɔn ho nto no so. Ada adi sɛ ontumi nsɔre bio, na n’awiei koraa abɛn. Ne saa nti Yehowa asomfo de kɔkɔbɔ yi rema: “Mumfi no mu, na moanyɛ ne nnebɔne no bi.” (Adiyisɛm 18:4) So woatie saa kɔkɔbɔ no? Woka kyerɛ afoforo? *
27, 28. (a) Nokwasɛm titiriw bɛn na Daniel werɛ amfi da? (b) Adanse bɛn na yɛwɔ a ɛkyerɛ sɛ ɛrenkyɛ Yehowa bɛyɛ ade atia nnɛ wiase bɔne no?
27 Enti ɛnnɛ nso ɔfasu ho nkyerɛwee no wɔ hɔ—nanso enni hɔ mma “Babilon Kɛse” no nkutoo. Kae nokwasɛm titiriw bi a ɛda adi wɔ Daniel nhoma no mu: Yehowa ne Amansan Hene. Ɔno nkutoo na ɔfata sɛ ɔpaw nea obedi adesamma so. (Daniel 4:17, 25; 5:21) Wɔbɛsɛe biribiara a ɛsɔre tia Yehowa atirimpɔw ahorow. Aka bere tiaa bi na Yehowa ayɛ saa. (Habakuk 2:3) Wɔ Daniel fam no, saa bere no dui bere a na wadi bɛyɛ mfe ɔha no. Afei ohui sɛ Yehowa atu wiase tumi bi agu—nea na ahyɛ Onyankopɔn nkurɔfo so fi bere a na Daniel yɛ abarimaa no.
28 Adanse wɔ hɔ a ɛkyerɛ pefee sɛ Yehowa Nyankopɔn de obi a obedi nnipa so asi ɔsoro ahengua so. Wiase no ani a abu agu Ɔhene yi so ne n’ahenni a wɔsɔre tia no yɛ adanse ankasa sɛ ɛrenkyɛ na Yehowa asɛe wɔn a wɔsɔre tia Ahenni nniso no nyinaa. (Dwom 2:1-11; 2 Petro 3:3-7) So woyɛ w’ade de kyerɛ sɛ yɛn bere yi gye ntɛmpɛ, na wode wo ho to Onyankopɔn Ahenni so? Sɛ saa a, woasua biribi afi ɔfasu no ho nkyerɛwee no mu ankasa!
^ nky. 6 Ɔhene Kores kaa Belsasar ho asɛm wɔ tete nkyerɛwee bi mu sɛ: “Wɔde obi a n’ani nyɛ den asi ne man so [hene].”
^ nky. 7 Ada adi sɛ Daniel kyerɛwtohɔ no mu nsɛm a emu da hɔ yi yɛ nokware. Wɔn a wotutu fam hwehwɛ tetefo nneɛma mu ahu sɛ wɔde ntayaa a wɔakokwaw ho na ɛyɛɛ tete Babilon ahemfie no.
^ nky. 9 Ɛbɛyɛ sɛ Babilonfo gyidihunu maa anwonwade yi yɛɛ hu kɛse. Babylonian Life and History nhoma no ka sɛ: “Wɔ anyame dodow bi a na Babilonfo som wɔn akyi no, yehu sɛ na wogye ahonhom di paa ma wɔn nyamesom nhoma dodow no ara yɛ mpaebɔ ne nsɛm a wɔde kankye tia wɔn.”
^ nky. 10 Biblical Archaeology Review nsɛmma nhoma no ka sɛ: “Na Babilonfo abenfo akyerɛw nsɛnkyerɛnne a ɛyɛ hu mpempem pii ato hɔ. . . . Bere a Belsasar hyɛe sɛ ɔpɛ sɛ ohu nea ɔfasu no ho nkyerɛwee no kyerɛ no, ɛda adi pefee sɛ Babilon anyansafo no kɔhwɛɛ nsɛnkyerɛnne ho nhoma ahorow yi mu. Nanso ɛso amma mfaso biara.”
^ nky. 12 Nsɛm asekyerɛfo ka sɛ asɛmfua a wɔde gyina hɔ maa “tirim yɛɛ wɔn keserenene” wɔ ha yi kyerɛ gyegyeegye kɛse, te sɛ nea basabasayɛ kɔɔ so wɔ apontow no ase.
^ nky. 26 Hwɛ Adiyisɛm—N’awiei Koraa Abɛn! a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., tintimii no nkratafa 205-271.
• Ɔkwan bɛn so na biribi bɛbɔɔ Belsasar apontow no mu October 5/6, 539 A.Y.B. anadwo?
• Wɔkyerɛɛ ɔfasu no ho nkyerɛwee ase dɛn?
• Babilon asehwe ho nkɔmhyɛ bɛn na na ɛrenya mmamu wɔ bere a Belsasar apontow no rekɔ so no?
• Dɛn na ɔfasu no ho nkyerɛwee no kyerɛ ma yɛn bere yi?
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 98]
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 103]
Share Share Nsɛmfua Anan a Ɛsakraa Wiase No
dp ti 7 kr. 98-113